Ku keydi Biyo adigoon ka fikirin Feejiyadaan kusocda Eco-Friendly-ka, Qasabadaha buuxiyo Weelka, Qasabada Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Ku ilaali Biyo Adigoon Ka Fakirin Feebahan Eco-saaxiibtinimada Leh
2020 / 09 / 14 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1269 0
Ku keydi Biyo adigoo ka fiirsanaya iyada oo leh qasabaddan bey'adeedu wanaagsan tahay
Biyuhu waa qayb aad u badan oo maalinle ah oo maalinle ah sida wax u cunaya ugana fogaanaya sariirta. Waxaan u isticmaalnaa biyo si aan dhammaad lahayn annaga oo si xamaasad leh uga hadlayna. Si kastaba ha noqotee shakhsiyaad badan ayaan helin gelitaan isku mid ah. Kawaran haddii uu jiro isbeddel yar oo aad ku sameyn lahayd qolkaaga qashinka si aad u ilaaliso biyaha dheeriga ah adoo xiise u leh?
Maraykanka caadiga ah wuxuu adeegsadaa 88 galaan oo biyo ah maalintii. Taasi waa 616 gallon asbuucii, ama 32,032 gallon 12 bilood. Nasoni waa shirkada aasaasiga ah ee wax ka qabata ilaalinta biyaha si dabacsan oo qaab cusub ah. Wax soo saarkooda aan waligood hore loo arkin, waxay ku kordhiyeen il biyo ah qasabadaada wasakhda, iyagoo isku daraya utility, nooca, iyo ilaalinta. Haddii aad bilowdid xamaasad ku saabsan isbeddelka cimilada maxalliga ah iyo inaad si aad ah ugu baraarujiso deegaan ahaan, Da Vinci biyaha ceelka eco-friendly waa meel fiican oo laga bilaabi karo.
Ku beddel jadwalkaaga qubayska Nasoni
Ka fikir subax gaar ah ama caado dhaqasha habeenkii ah. Cibaado subax wanaagsan ama habeenkii ah. Waa waajib in la cadayo dhaldhalaalkaaga. Waa waajib in la qaato daawooyinka, fiitamiinnada nafaqada leh, ama daroogada. Shakhsiyaad badan ayaa waqti ku lumiya inay xiirtaan wejigooda. Waana muhiim inaad dhaqdo wajigaaga. Iyo habka loo sameeyo waxaas oo dhan, maxaa kale oo socda? Waxaad sameyneysaa dad fara badan miiskaaga.
Dhalinyartiinu waxay jeclaan doonaan in biyaha lagu keydiyo qasabaddan bey'ada u wanaagsan
Waad kala firdhisay ama daadisay biyo gabi ahaanba, hadana waa muhiim in la nadiifiyo taas. Waxaad suurtagal tahay inaad isticmaasho shukumaan kale, taas oo abuureysa dhar dhaqid dheeraad ah. Iyo dhar dhaqid dheeri ah oo la sameeyo waxay keenaysaa isticmaalka weyn ee biyaha. Aynu wajahno. Dabacsanaantu waa mid ka mid ah qolalka qashinka muhiimka u ah ee guriga ku yaal markay soo degto.
Hadda, waxaa jira xallin ka weyn
Nasoni, waxaad ku badali kartaa jadwalkaaga qubayska oo aad dib u ceshan kartaa qashinka biyaha ee qoyskaaga. Dhammaanteed jawaabta waa sahlan tahay, waan la yaabnay qofna ma tixgelin tan tan hore. Hadda oo Nasoni haysto, waxaad u baahan doontaa inaad soo iibsato qasabaddan oo sinnaba ugu noqon meysid qasabadda hore ee qashinka.
Nasoni waxay kacdoon ku sameysay tuubada dharka lagu dhaqo iyadoo lagu daray xulashada biyo bixinta labaad. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad biyo ka hesho biya-mareenka sida aad qasabad kasta uga heli karto. Si kastaba ha noqotee waxay ku darsadeen shaqo il. Isku rogida isdhaafsiga, waxaad haysataa ilo. Waa ilo ka faa'iideysta 88% biyo aad uga hooseeya qasabadaha kala duwan.
Da Vinci waxaa lagu heli karaa laba cabbir, 4 ″ iyo 8 ″. Waxay xulanaysaa dhammaadka quruxda badan ee PVD ee adag oo toos ah u xoqida. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa shaandhada biyaha hoostiisa-miiska khabiir sare oo wanaagsan si aad u hubiso inaad isticmaaleyso nadiifinta, biyaha ugu nadiifsan ee la heli karo.
Nasoni waa ka weyn yahay qasabad kaliya
Qalabkan bey'ada ku habboon wuxuu ka weyn yahay kaliya qalab si cadaalad ah wax loogu daro si aad ugu darsato sariirtaada. Waa wax fiican, waxay umuuqataa inay fiicantahay, laakiin xaqiiqdii way ka badantahay intaas.
Nidaamkaaga xiirista ayaa ka dhib yar sidii hore weligood leh Da Vinci
Faa'iidooyinka Da Vinci Fountain Tuunbada
Tuubadaani waxay baabi'ineysaa baahida koob, iyadoo lagaa keydinaayo suxuunta iyo biyaha inaad xoqdo.
Waxaad heli doontaa qasabad ka fayow nadaafad badan dhamaan qasabadaha kala duwan. Dhammaanteenna waxaan jecel nahay qashin-qubis aan jeermis lahayn.
Da Vinci waxaa loo dhisay gabagabadii, iyadoo kaliya la isticmaalayo mid ka mid ah sahayda ugu fiican.
Badeecadani waa la naqshadeeyay, la farsameeyay, lagana oggolaaday gudaha Mareykanka inay ka madaxbannaanaato NSF 21 iyo 372.
Nasoni wuxuu hayaa 6 xaqiijin oo aan khibrad lahayn.
Maaha inaad u foorarsato si aan caadi ahayn si aad u luqluqdo ka dib markaad cadayato ama aad gacmaha u cabto biyo cabitaan ah.
Maadaama aad tahay iibiyaha koowaad ee qasabada biyaha, waxaad heli doontaa Dammaanad Nolol xadidan.
Samee wax dheeri ah oo ay weheliso Da Vinci Water Fountain
Qasabad waa qasabad keliya. Uguyaraan, taasi waa tii caadiga ahayd. Hada, waad kudarsan kartaa qasabada musqushaada, waxbadan oo dheeri ahna si fudud ku samee.
Ma jiro wax koob ah oo ku dhex jira qolka jiifka mar dambe oo leh isha biyaha laga dhaansado
Waxaad ku ogaan doontaa inay ka fududdahay inaad mayrto kadib markaad cadaydo, wejigaaga oo biyo raaci, si aad u hesho biyo aad cabto, ama aad timo ugu siiso biyo maydh miisaan fudud Kuwaas oo leh arrimo joogto ah oo wanaagsan ama mar labaad xanuun, waxaad awood u yeelan doontaa inaad dib u soo ceshato walwalka jirkaaga ka soo foorarsiga. Taasi waa hal shay oo shakhsiyaad badani aysan tixgelin siin, laakiin runtii waa wax aad u fiican oo qof ugu dambeyntii sameeyay.
Aynu ka wada hadalno dhowrista biyaha
Horaan u sheegnay, laakiin hubaal inay soo noqnoqonayso. Tuubadaani waxay keydisaa 88% biyo dheeri ah marka loo eego qasabadaha caadiga ah. In kasta oo ay muhiim tahay in la ogaado in tiradaasi ay u muuqato in lagu saleynayo inta badan qaybta isha ee qasabadda oo aan waligood hoos u soo degin. Sikastaba kaalay. Waxaad ka faa'iideysan doontaa heck out of function ishaas.
Nasoni waa shirkad rasmi ah oo badbaadada deegaanka ah WaterSense Accomplice. Waxay intaa kudarsadeen Isbahaysiga Waxtarka Biyaha. Waxay u heellan yihiin ilaalinta biyaha iyo helitaanka qalabka guryaha shakhsiyaadka si ay ugu qaadaan tallaabo sida ugu habboon.
Ka soo dhaadhac biyaha hoostiisa una gudub ilaha adigoo si fudud ugu rogaaya isweydaarsiga
Mareykanka caadiga ah wuxuu adeegsadaa 4.4 galaan oo biyo ah markasta oo ay cadaydaan dhaldhalaalkooda haddii ay dhacdo inay biyahooda shaqeeyaan. Eray: haddii aad ka tagayso biyahaaga oo shaqeynaya intaad cadayanayso dhaldhalaalkaaga, ha yeelin. Wax-ka-beddellada yaryar ee dabeecadaha ayaa saameyn weyn ku yeelan kara hareeraha iyo dhowrista ilaha waxtarka leh. Iyo, waad fahantay, raadadka kaarboon iyo intaas oo dhan.
Biyo-marin abaalmarin ah
Shakhsiyaadka arkay oo isku dayay Qasabada Biyaha ee Nasoni Da Vinci way jecel yihiin. Aad bay u jecelyihiin, Nasoni wuxuu ku kasbaday abaalmarinta Better of the Jikada iyo Tub Trade Present, Xulashada Shakhsiyaadka, sanadka 2018. Iyo qasabaddan musqushaada dhexdeeda, waxaa hubaal ah inaad ku guuleysan doonto abaalmarinta qalabka wax lagu dhaqo ee wanaagsan asxaabtaada. .
Ilaalinta biyuhu sinnaba ugama fududeyn ama u rooneyn
Waa wax la siiya oo aan jecel nahay sida biyo badan ay u ilaalinayaan qasabadda qasabadda. Waxaan intaa sii dheer jecel nahay dhammaan shahaadooyinka ay qasabaddan deegaanka ku habboon tahay leedahay, oo ay weheliso WaterSense iyo inay ADA waafaqsan tahay. Xarunta wax soosaarka ee Nasoni loo doortey ayaa ah mid tixgelin siineysa sida ay yihiin waana xarun wax soo saar ISO 9001. Waa inaad iibsataa qasabadaada adoo garanaya in fikirka ugu adag la galiyay hareeraha talaabo kasta oo habka loo maro.
Waxa aan jeclaan lahayn ❤️ inaan ku aragno moodooyinka mustaqbalka
Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno moodooyin u dhigma xulashooyinka weelka qashin-qubka ee dheeraadka ah. Waqtigan xaadirka ah, Da Vinci Fountain Faucet isma waafajin doonto gidaarrada lagu rakibay, hal dalool, ama weel dhaadheer oo weel ah.
Iibso qasabadda Da Vinci Water Fountain
Waxaad u baahan tahay mid hadda, sax ah? Ka dib oo dhan, waad sameysaa. Natiijo ahaan sheygan waa mid aad u fiican oo waa xulasho jawi xeel dheer leh. Madaxa ku sii jeed Nasoni's Kickstarter oo aad iibsato qasabadaada bey'adeed-saaxiibtinimo xilligan.
Tera waxay ka shaqeysay ganacsiga daabacaadda illaa 2004 waxayna tixgelinaysaa weedha qoran ololkeedii hore. Marka aysan wax qorin ama wax ka beddelin, waxay caadi ahaan u socotaa, tolmo, ama fiirinta-daawashada Netflix.
Hore:: Qalabka musqusha ee hore u wasakhaysan ka dhig mid cusub | Guryaha Siouxland Next: Isku beddelka qashin-qubka musqusha iyo pop-up
58m2 Naqshadeynta Qolka Furan, Qaabka "Shaah Caanaha" Qaabka, Super Style!
2021 / 05 / 13 2750
2021 / 05 / 09 3539
2021 / 05 / 08 1617
2021 / 02 / 04 2530